အရသာအလန်းကြီးနဲ့ ယိုးဒယားစဉ့်အိုးကြက်ကင်အရသာ အိအိဆိမ့်ဆိမ့်လေးခံစားနိုင်မယ့်…. – FoodiesNavi
By yin sandi On July 5, 2018 0
စားသောက်ဆိုင်အသစ်သစ်တွေရဲ့ လက်ရာအသစ်အဆန်းတွေကိုမှ မြည်းစမ်းခံစားချင်ကြတဲ့ အစားတစ်လိုင်းတို့ရေ… ရင်ခုန်စိတ်လှုပ်ရှားရလောက်တဲ့ အရသာအလန်းကြီးတွေခံစားရမယ့် ” YPPN ” ဆိုတဲ့ဆိုင်သစ်လေးအကြောင်း လက်တို့ပေးဦးမယ်နော်။ ဇွန်လတတိယပတ်ကမှစဖွင့်တာဆိုပေမယ့် ဆိုင်သစ်လို့မထင်ရလောက်အောင် လူသိများနေတဲ့ဆိုင်လေးမို့ မြန်မြန်လေးဒိုးလို့ရအောင် Honest Review လေးရေးပေးမယ်နော်။
အစားတစ်လိုင်းတို့ သည်းလှိုက်ဖိုသွားလောက်အောင် အရသာခံအာရုံကို နှိုးဆွနိုင်ဦးမယ့် Menu လေးကတော့ စဉ့်အိုးကြက်ကင်ပါပဲ။ ဆိုင်ထဲဝင်ဝင်ချင်းကတည်းက ရနံ့တွေလွင့်ပျံပြီး နှာခေါင်းထိပ်ဝမှာစွဲကျန်ရစ်နေလို့ အခုအနံ့ရတဲ့ဟာလေးစားချင်လိုက်တာလို့ ဖြစ်သွားလောက်အောင် ဆွဲဆောင်လွန်းသူလေးပါ။ ပုံမှန်ရန်ကုန်မှာစားနေကျ ကြက်ကင်တွေလိုမဟုတ်ဘဲ ကြက်အကောင်လိုက်လေးတွေကို သံချိတ်နဲ့ချိတ်ပြီး စဉ့်အိုးထဲမှာထည့်ကင်ထားတာမို့ ကြက်သားရဲ့အပေါ်ယံအရေခွံကနေ အတွင်းလွှာတွေထဲထိ နူးညံ့အိစက်နေပြီး အသားမွမွလေးတွေက ဆိမ့်နေတာပဲစားလို့ကောင်းချက်ပဲ ? Sauce လေးကလည်းတော်တော်ထူးခြားတယ်။ ယိုးဒယားစတိုင် စပ်စပ်ချိုချိုလေးနဲ့ ကြက်ကင်ရဲ့အရသာကို ပိုထူးခြားသွားစေတယ်။ တစ်ပိုင်းကိုမှ (၆၀၀၀)ပဲပေးရတယ်။ နှစ်ယောက်လောက်အေးဆေးစားလို့ရတယ်။ မင်မင်ကတော့ ကြက်ဆီထမင်းအလွတ်တစ်ပွဲနဲ့တွဲစားတယ်။ ကြက်ဆီထမင်းကလည်း တအားကြီးမအီဘဲ အနှစ်အရသာကောင်းကောင်းလေးရယ်။ ကြက်ဆီထမင်းက(၇၀၀)ဆိုတော့ (၆၇၀၀)နဲ့ဗိုက်ကိုကားရောပဲ။
ရောက်လက်စနဲ့ ထပ်စားတာတွေကတော့ ကွေ့သယို ၊ ပင်လယ်စာထောင်း ၊ မှိုအရွက်စုံဟင်းရည် ၊ Thai Ice Tea ၊ Sunkist Juice တွေပါ။ ကွေ့သယိုလေးကတော့ အရသာမဆိုးဘူးပြောရမယ်။ ဝက်သားလုံး ၊ကြက်သားဖတ်လေးတွေနဲ့ အရသာကတော့မဆိုးဘူးပြောရမယ်။ အသားလုံး(၃)လုံး ၊ အသားဖတ်(၅)ဖတ်ပဲပါတယ်။ ဈေးနှုန်းက(၃၀၀၀)ကျပ်ဆိုတော့ သိပ်တော့မဆိုးဘူးပြောလို့ရတယ်။ အရသာကတော့ရင်ထဲသိပ်မရောက်လှဘူး။
ပင်လယ်စာထောင်းကတော့ ပုဇွန်ထုပ်အသေး(၂)ကောင် ၊ ပြည်ကြီးငါး(၄)ဖတ်လောက်နဲ့ ဂဏန်းချောင်းအနည်းငယ်၊ ကျောက်ပွင့်လေးတွေပါတယ်။ ထောင်းထားတဲ့အရသာရော အရည်လေးကရော တော်တော်လေးကောင်းတယ်။ အရသာလေးကောင်းပေမယ့် မင်မင့်အတွက်ကတော့ ဈေးကြီးတယ်ပြောရမယ်။ (၅၀၀၀)ကျပ်ပေးရပြီး နည်းနည်းလေးပဲပါတယ်ကွယ်။ ပေးရတဲ့ဈေးနဲ့ဆို ဒီထက်ပိုများသင့်တယ်လို့ထင်တယ်။ အစားတစ်လိုင်းတို့ အကဲဖြတ်လို့ရအောင် မင်မင်ရိုက်လာတဲ့ ပုံထဲမှာသာရှိုးလိုက်တော့နော်။
မှိုအရွက်စုံဟင်းရည်ကတော့ တော်တော့ကိုဂွမ်းပါတယ်။5Star ဆိုရင် 1 Star လောက်ပဲတန်ပါတယ်။ တစ်ယောက်နဲ့တစ်ယောက် သဘောထားကွဲလွဲနိုင်ပေမယ့် အက်မင့်အတွက်ကတော့ အာ့ဆိုင်ကိုနောက်တခါသွားဖြစ်ခဲ့ရင် လုံးဝမစားမယ့် List ထဲထိပ်ဆုံးကပါပဲ။ ငံပြာရည်လိုအနံ့ကြီးကအတော့်ကိုဆိုးလွန်းပါတယ်။ (၄၅၀၀)ပေးရပြီး ဒီလောက်အရသာပဲရတာ လုံးဝကိုမတန်ပါဘူး။
Thai Ice Tea ကတော့အရသာလေးကောင်းတယ်။ Tea နံ့သင်းသင်းလေးနဲ့ ဆိမ့်ဆိမ့်အေးအေးလေးဆိုတော့ ခံတွင်းထဲရှင်းထွက်သွားတာပဲ။ ဈေးနှုန်းက(၂၅၀၀) ၊ Sunkist လေးလည်းမဆိုးဘူးပြောရမယ်။ ကြက်ကင်စားပြီးအချိန် အအီပြေလေးသောက်ချင်တယ်ဆို ချိုချိုချဉ်ချဉ်အရသာလေးနဲ့ Sunkist ကကွက်တိပဲ။
အလုံးစုံခြုံပြောရမယ်ဆိုရင်တော့ စဉ့်အိုးကြက်ကင်လေးနဲ့ ကြက်ဆီထမင်းကြိုက်တယ်ဆိုတော့ YPPN ကအရသာကိုလုံးဝစွဲလမ်းသွားမှာ အသေအချာပဲ။ တခြား menu တွေတော့အားမပေးချင်ဘူးရယ်။ ဈေးသင့်တင့်ပြီးအရသာကောင်းကောင်းလေးစားစေချင်တဲ့ မင်မင်ရဲ့စေတနာသက်သက်ဖြစ်တဲ့အတွက် သဘောထားကွဲလွဲနိုင်ပါတယ်နော်။
ဆိုင်က(၂)ထပ်ရှိလို့ ကျယ်ကျယ်ဝန်းဝန်းလေးထိုင်လို့ရတယ်။ အပေါ်ထပ်ကတော့ ပိုရှင်းပြီးပိုမိုက်တယ်။ အေးအေးဆေးဆေးလေးစားလို့ရတယ်။ ဆိုင်လိပ်စာကတော့ အမှတ်(၁၂၂) ၊ ဦးချစ်မောင်လမ်းနှင့် အရှေ့လမ်းဟောင်းထောင့် ၊ ဗဟန်းမြို့နယ်ဖြစ်ပါတယ်။ ဆိုင်အနီးတဝိုက်ဆိုရင် Delivery Free နဲ့ 09783463377 , 09783463388 တွေကိုဖုန်းဆက်မှာယူလို့ရတယ်နော်။ ဦးချစ်မောင်လမ်းဆိုတော့ ကားပါကင်တော့ အဆင်မပြေဘူးကွယ်။ ကဲ.. အက်မင်ကတော့ ဒီဆိုင်လေးကို2Star ပေးပါတယ်နော်။